Fampihavanam-pirenena eo amin'ny finoana - Dinika forum.serasera.org
Fampihavanam-pirenena eo amin'ny finoana
Fitohizan'ny hafatra : Fampihavanam-pirenena eo amin'ny finoana
endriny - 04/01/2017 16:40
Raha milaza fampiahavanam-pirenena isika, miantso fampiraisam-pinoana. Kanefa ireo Fiangonana nibodo sy nangalatra ny fiangonan'ny hafa tsy mbola mamerina na manolo ireo zavatra nobodoiny sy nangalariny, dia zava-poana ihany ny fampihavanam-pirenena sy ny firaisam-pinoana.
Dia zava-poana ihany koa ny fidradradrana fampiharana ny rariny sy ny hitsiny eto Madagasikara, satria ilay finoan'ny mpiantsa azy aza miorina amin'ny halatra sy ny fibodoana ny fananan'ny hafa.
Antson'ny samy marenina ny fandrebirebena vahoaka amin'ny fampihavanam-pirenena saritsariny.
Ary aoka ho tsaroana fa teo amin'ny fiarahamonina Malagasy ary eo amin'ny fiarahamonina dia tsy misy izany hoe Havana izany ankoatry ny olona iray razana, sy fianakaviana amin'ny tena.
Ry zareo eny ambony alitara irery ihany no miantso isak'alahady hoe : "Ry Havana" mbola asiana mihintsy hoe: "Malala ao amin'ny tompo"
Oviana izaho sy ianao no niantso olona hoe : "e, o ry Havana a"?
Satria tsy teny fampiasanay Malagasy ny hoe : "Havana", fa teny nentina nambaboana anay hanaiky ho eo ambany jiogan'ny frantsay. "Sakaiza, Fianakaviana, Ankohonana, ary mpiray vodirindrina, mpiray tampoho, Ziva..." izany no fiteny Malagasy teo amin'ny fiarahamonina hatramin'izay ka hatramin'izao.
Fa ry zareo mpilalao vahoaka no mirenty ny hoe Havana
rhaj0 - 05/01/2017 13:53
endriny Ry zareo eny ambony alitara irery ihany no miantso isak'alahady hoe : "Ry Havana" mbola asiana mihintsy hoe: "Malala ao amin'ny tompo"
Ireny mpifankatia ireny kosa no mifampiantso hoe "rahavako" na koa "malala". Ohatra ireny hiran'i Henri Ratsimbazafy sy ny "etsy rahavako, raiso ny tanako" ireny.
Fa dia asa ho'a, fa dia hoe, @ dikany inona no nampiasain'ny mpitondra fivavahana ireto teny izany..
- Tena hoe, ry "havako malala" sady mitilitily an'ireo andriambavilanitra tsara fihaingo ve ny masony, sa...
- tena misy dikan-teny ara-baiboly hafa indray ilay "ry havako malala"???
Dia torak'izany koa ny "fihavanana" na "fampihavanana" amin-drizareo? "misy dikan-teny ara-baiboly hafa" toa ny resak'i Leopold ve izy izany???
endriny - 05/01/2017 18:12
I Henri Ratsimbazafy amin'ny hira io, ary amin'ny maha kristianina azy, na i Feo Gasy "O Rahavako o!"
Fa I Rhaj0 ve efa niteny olona hoe : "Rahavako", iza tamin'ny olona teo akaikintsika no mba niantso hoe : "Havana, ry Havana, o Rahavana"?
Izaho tsy handainga fa ho ahy dia tsy nisy. Satria tsy teny fampiasan'ny Malagasy an-davan'andro ny hoe Havana. Toa ny hoe, tsy fitenin'ny Malagasy an-davan'andro ny hoe : "Tiako ianao", satria tsy kolotsaina ary tsy riba Malagasy io, fa nampidirina tao anatin'ny sain'ny Malagasy fotsiny, tamin'ny fandikateny nataon'ny misiona.
Ny tenigasy sy ny riba Malagasy dia hoe: "Lalaiko ianao, Malala", ilay hoe "Tiako" dia dikateny malalaka ny hoe "Aimer, love" ka afaka tianao daholo na ny voninkazo na ny omby na ny saka. Fa tsy afaka miteny mihintsy isika hoe: "Lalaiko ny saka sy ny omby"
Dia toa izay koa ny hoe fihavanana sy ny hoe Havana, tsy izay olona hitanao rehetra dia hoe havana sy handalana fihavanana, raha tsy misy ny rohy milaza fa Havana na mpihavana tokoa eo amin'ny tetiharana ara-poko. Eo aza mbola misy hoe havantetezina....
rhaj0 - 06/01/2017 14:39
Ts'haiko aloha, fa raha izaho manokana, dia (mbola te-) hino foana hoe, misy raha (something) ao @ sosaity TSY voakitiky ny Kristianisma, ary izay "raha" izay dia tena samy hafa @ "raha" Kristiana.
Ohatra raisiko matetika dia ny Amerindiana, izay TSY manaiky ny ati-panahiny, tsy manaiky mihintsy, ny isian'ny mpiray monina aminy, ka hoe, tsy misakafo, na hoe tsisy fialofana. Torak'izay koa ny Malagasy -- talohan'ny nidiran'ny tandrefana/kristianisma.
Ny firenena (tandrefana) Kristiana rehetra anefa, dia tena normal be ilay fadiranovana matin'ny fahantrana eo ambavahady volamenan-dRampanana.
Dia hoy anefa ny Kristiana hoe, tsy @ revin-drameva anie ireo Rampanana ireo, ary i Jesosy mihintsy koa no mpitsinjo ny mahantra... Manaiky an'izay aho: i Jesosy, @ mpandinika sasany, dia toa Marxista miihintsy. Ireo pretra (sasany) tao Amerika Atsimo (isan'izany ry Begiligilia) dia te-hitsinjo ny mahantra (toa an'i Jesosy) koa, nefa moa, indrisy ho'a ry tava-tsosisy, fa i Vatican no mpampianatra mahay sy tompon'ny fahefana (sy ny vola).
Ny mpandinika koa, dia milaza fa ny protestanta, noho ny finoany, averiko indray, noho ny finoany, no manana na mahay ny revy kapitalista. Ny Katolika dia .. mahantrahantra kokoa.
Ohatra rahefa kianina ireo evanjelisitrabe ao Zamerika ao, fa hoe, toa manakarembe izato ianareo, dia tena TSY manaikitra mihintsy ny conscience-ny, fa tena sitrapon'Andmntra hono izany. Ny voambakany koa aza moa "mino" an'izany, k'akory ataonao. Dia entre-pa fa izany koa no ianaran-dry Mailhol sy ry Herinirina, SY ny mpanaraka azy.
Koa raha "marxista" i Jesosy, dia fa naninona no lasa tsy-vanona toa io ny firenena rehetra mandala ny Kristianisma, na ny firenena rehetra "de tradition chretienne"???
Ny valin-teniko dia ... savasavao ho'a ny ifotony eee... dia ny "finoana" izany.
lahindroy - 08/01/2017 20:23
dia faly miarahaba antsika rehetra tsy ankanavaka ny tenako tratry ny taom-baovao 2017 na dia somary tara aza ilay fiarahabana ; maniry ny hitohizan'ny fafifanan-kalozan-kevitra amim-panajana izay efa nisy teto hatramin'izay
endriny - 14/01/2017 08:17
Ilay fampihavanana ataon'ny fiangonana sy ireo mpanao politika manaraka azy moa dia tsy tantara vao izao ny teto Madagasikara fa hatramin'ny fitsirihan'ny mpanjanaka hiditra teto, ary hatramin'ny andron'i Philip sy Papa Clement V. Izay samy mody mandrangaranga fampihavanana kay mamono ny ankilany izay atahorany.
lahindroy - 14/01/2017 21:59
Miarahaba antsika jiaby
Fanontaniana tsotra : fa nahoana ny fampihavanam-pirenana no tokony hisy resaka firaisam-pinoana ? F'angaha ny Malagasy sy ny mponina rehetra dia kristiana avokoa na silamo avokoa na mpanaradia ny finoan-dRazana avokoa ...?
Firenena sy tanin-drazana no iraisana fa TSY FINOANA akory (ary io finiavana tia hanjakazaka sy hampanjakazaka ny finoana arahina io ihany no nampisy ny adi-pinoana hatramin'izay nisian'ny finoana miambo ho tompon'ny fahamarinana ka mitsipaka izay hevitry ny hafa )
rhaj0 - 16/01/2017 13:19
Raha vao migogola ianao manontany hoe, firy ny salan'isan'ny Malagasy manaraka ny Kristianisma, dia eo @ 50% eo foana.
Ka ity FFKM ity izany, raha amiko aloha, dia tena TSISY lezitimitehany akoriny eee...
La légitimité est la qualité de ce qui est fondé en droit, en justice, ou en équité (définition du Petit Larousse). La légitimité repose sur une autorité qui est fondée sur des bases juridiques ou sur des bases éthiques ou morales, et permet de recevoir le consentement des membres d'un groupe.
endriny - 17/01/2017 15:09
Satria ireo mpitarika FFKM ihany no tena mivoy an'io, dia miantso mpanao politika sy fikambanana iraisam-pirenena hirohotra hanaraka azy.
Fa i Lahindroy ve mahatsapa na mahita eo amin'ny mpiara-monina amintsika ilaina ny fampihavanam-pirenena? Sa ry zareo mpiady seza no mila mihavana?
endriny - 18/01/2017 07:09
Tany aloha tany dia nisy ilay fampiraisana sy fampihavanana ireo andia 'olona roa niady ho an'ny fiangonana tamin'ilay adimasina tany Jerosalema, dia ny templier sy ny hospitalier ireo. Ilay Papa Clement V sy ilay mpanjaka frantsay Philip No tompon'ny hevitra. Ny tena tetika tamin'io hampanekena ireo Templier fa tsy maintsy miditra hospitalier izy ireo ary manaiky fa ny hospitalier no lehibeny. Tsy nahomby ny tetika, ary dia nosamborina tsirairay ireo Templier. Nasaina niaiky fa mikasa hanongam-panjakana sy mifofo ny ain'ny Papa. Izay tsy manaiky an'io fibabohana io dia dorana velona eo imasom-bahoaka.
Toa izany koa ny zava-nitranga teto Madagasikara. Mody nisy ny fampihavanana notarihin'ny FFKM Razanakolona, nampanaiky ny ankilany hilavo lefona tamin'ny 2009. Tsy nanaiky io, ary dia hitantsika ilay fandorana tamin'ny taona 1300 fa niverina.
Dia miantso fampihavanana ihany izao... dia asa inona intsony no ho dorana eto izany?
rhaj0 - 19/01/2017 13:07
Ka izao hono koa no mahatonga ny olana fototra eo @ firenena, dia ny fahantrana.
La communauté juive à Madagascar a souligné que cette situation découle du fait que les Malgaches ont perdu leur identité, la vraie alliance avec l’Etre suprême.
Les fidèles aux religions traditionnelles ont été également de cet avis. Selon eux, l’inobservation des règles relatives à nos us et coutumes et le non respect des lieux sacrés comme l’« Anjorofirarazana », la partie nord-est de la maison consacrée au « Zanahary », ou le Créateur, et les ancêtres, a complètement coupé les ponts entre les esprits divins et les Malgaches.
Izany hoe, rahefa TSY mivavaka (@ ilay ivavahan-drizareo) hono dia mihinan'ny tsakaokany.
rhaj0 - 19/01/2017 20:24
Inty misy boky mamahabaha ny @ Fiangonana sy Finoana ao Mada
ndao iarahana vakiana...
rhaj0 - 19/01/2017 20:29
hoe.. 20 Zanvie 1980 no niorina ny FFKM, izay toa nikasakasa hanao sermon an-dRatsiraka hono. Fa ny an'ilay Deba no tonga aloha: t@ io izy no nitory teny (sy namely an'i Simon Pierre)...
rhaj0 - 19/01/2017 20:35
INty koa misy boky hafa
endriny - 20/01/2017 05:35
Misaotra nizara e, fa be dia be ny boky mirakitra ny finoana, indrindra ny tantaran'ny finoana kristianin teto Madagasikara, nanomboka tamin-dry Flacourt, ry Hastie, Cale, Laborde... Pedro sns samy nanoratra daholo.
Fa ito mba misy famintinana kely ny Katolika tamin'ny faran'ny taonjato faha 19pensee
rhaj0 - 26/01/2017 20:04
Mampieritreritra tokoany mamaky ireto boky.
Ka taloha izany, raha ny fahazoako azy, ny firafitry ny fiaraha-monina,
- dia "organisés en unités de résidence fondés sur la parenté" (village-lignage ou village-clan)... qui peuvent éclater, créant un nouveau village..
- dia miitatra .. "communauté de résidence sur l'entente et un pacte d'assistance mutuelle" (confédération de clans)
-- izay ilay "communauté de base" (hiérarchisés)
- fa "des fanjakana-misy-mpanjaka (stratifiés) sont créés au détriment des communautés de base"
- dia ... "usant de la violence, les mpanjaka dépossèdent les foko de leur croyances pour que ceux-ci soient soumis à leur autorité...
Ny tiako ahatongavana dia hoe, ahoana tsara tokoany moa izany ny hoe "fihavanana" t@ izany andro izany. Ilay "l'entente et un pacte d'assistance mutuelle" teo @ "communauté de résidence" ve??? Satria ny "village-lignage" izany efa mpianakavy.
endriny - 27/01/2017 15:29
Ilay razana taloha tsy mivavaka sy manao joro raha tsy efa hanao zavatra (hanangana trano, hamaky tany, hamboly), na misy voina mihantra toa ny haintany, marary. Fa miambozona vakana na ody kely fotsiny izy hiarovany ny tenany @ ratsy.
Ny razana taloha izany dia mankalaza ny hoe: "Zanahary nanome fa ny olona no tsy ambinina"
rhaj0 - 27/01/2017 16:15
endriny Ilay razana taloha tsy mivavaka sy manao joro raha tsy efa hanao zavatra (hanangana trano, hamaky tany, hamboly), na misy voina mihantra toa ny haintany, marary. Fa miambozona vakana na ody kely fotsiny izy hiarovany ny tenany @ ratsy.
Iieee... dia tsisy fiangonana izany koa taloha.
Dia tsisy an'ilay (manondro-tena ho) deba, izay manesika dia manesika resa-kehy isan-kerinandro, no sady misesika dia misesika ny 1/10-karenan'ny olona.
endriny - 02/02/2017 15:26
Ilay 1/10n-karena ange hono anitarana ny fanjakan'Atra e.
Izay vao haiko fa hay koa moa msy hetra tsy maintsy aloha ho an'Atra. Soa aza fa tsy nasiany sarany isam-bolana ho an'ny Masoandro.
Ary mety io tsy fandoavana faha folon-karena io angamba izao no tsy maha avy ny orana mihintsy
rhaj0 - 02/02/2017 17:13
endriny Izay vao haiko fa hay koa moa msy hetra tsy maintsy aloha ho an'Atra.
Giravy ihany an... i Jesosy ho'a rahefa nila vola, dia naniraka ny mpianany hanjono (Matio 17:27).
Fa nahodin'i Paoly ny resaka, ary dia nasaina nandoa vola tany aminy ny olona, fa ho an'ilay Fiangonana (naoriny) hono. Eny tokoany, fa toa ny mandoa hetra io: 10%.
FA ny principe-n'ny fandoavana hetra anefa, na hoe ny lojikan'ny olona, dia hoe
Izany hoe, raha manangona Hetra @ olona ianao, ka hikirakira (gerer) an'io Hetra io, dia ianao dia olona nofidiana ho "Solontena"-n'ireo nandoa Hetra.
Ka moa va arak'izay principe izay ny fanangonana vola (na Hetra) ao @ finoana isan-karazany ao ???
Ny valiny moa dia efa fantatra, ohatra fa : TSY demokrasia ny Leglizy .
Fa dia tena hadalan'izay miditra @ izany izany eee.. efa olon-dehibe vita vaksiny daholo ny ao... Nefa ve, tena izany tokoany???
Dia mampalahelo izay tsy vita vaksiny dia ambakain'ireo tsy-mataho-tody ao ampiangonana ao.